Miala tsiny aho Careerbuilder! iFilm mitondra dokambarotra Super Bowl | Martech Zone
Alatsinainy 5 Febroary 2007 Alatsinainy 5 Febroary 2007 Douglas Karr
Eny ary, nahazo ny tsy fankasitrahako ny Careerbuilder an'ny gazety aho, avelao ny tsara indrindra ho ahy. Raha nanao snooping fanampiny aho, dia ho hitako fa manan-jo hizara ireo sarimihetsika ny iFilm. Tsy izany no nataon'i Youtube. Ka - eto izy ireo, ny dokam-barotra tiako indrindra amin'ny Super Bowl 2007:
Miala tsiny aho Careerbuilder! (Na dia mbola mieritreritra aza aho fa tokony hizara fizarana feno sy maimaim-poana amin'ny doka amin'ny alàlan'ny vondrom-piarahamonina tambajotra sosialy amin'ny Internet)
Raha hijery ny doka Super Bowl an'ny taona 2007 dia izao:
iFilm 2007 dokam-barotra Super Bowl